မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ဒီလကုန်လုပ်မဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးပွဲ မဖိတ်ရေး၊ ဒီနေ့ အရေးပေါ်ဆွေးနွေးရတာက အာဆီယံ ဂုဏ်သိက္ခာဆယ်နိုင်ဖို့ပါလို့ သုံးသပ်မူတွေရှိနေပါတယ်။
ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း အခုလို ထိပ်သီးပွဲ မဖိတ်ဖို့က၊ သူ့ရပ်တည်ချက်လည်းဖြစ်တယ်၊ အများလည်း အလားတူခံစားနေရတယ်လို့၊ Lowy Institute အဖွဲ့ အင်တာနက် Online ဆွေးနွေးပွဲမှာ လူသိရှင်ကြား မနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကနေ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ကျလာနိုင်ပါလဲ။ စင်္ကာပူအခြေစိုက် ISEAS Yusof Ishak Institute ခေါ် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာနက မြန်မာအစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မမိုးသူဇာကို ကိုဝင်းမင်းက မနေ့ညက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာစစ်ကောင်စ်ီ ခေါင်းဆောင်ကို အောက်တိုဘာ ၂၆ ကနေ ၂၈ အထိလုပ်မယ် နှစ်စဉ် အာဆီယံအစည်းအဝေး မဖိတ်ဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က လူသိရှင်ကြားပြောခဲ့တာကို အခု အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒီနေ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်မယ့် ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးTeodoro Locsin ဒါက သူရပ်တည်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အရေးပါတာကို အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ။. ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အဝေးမှာပဲ. ဆက်ခွာထားသင့်ပါတယ်။ အရင်ပြောသလိုပဲ တနည်းနည်းနဲ့ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ရင် ကျနော်တို့ အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့အဖြစ်ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပါ။ ဆိုလိုတာက အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ၊ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသိအမှတ်မပြုတာတွေကို အချင်းချင်းစု သဘောထားပေးတဲ့ လူတစုသာဖြစ်သွားကြမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် အားကောင်းတဲ့ ဒေသတွင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့လို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ အာဆီယံထဲက ကျနော်မိတ်ဆွေတွေ ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီး အလားတူခံစားနေကြရပါတယ်။ ကုန်းတွင်းကျ အာဆီယံနိုင်ငံတချို့အနေနဲ့ ပျော့ပြောင်းတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် လမ်းပဲဖွင့်ထားပေးစေချင်တာပါ။ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကိုတော့ သူတို့မဆန့်ကျင်လိုပါဘူး။ အဓိကထိခိုက်မှာက အဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ အားလုံးကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့ကလည်း အလားတူအနည်းနဲ့အများပြောလာချိန်မှာ ဒီကုန်တွင်းကျနိုင်ငံတွေဆိုတာက ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ လာအို နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီနေ့အာဆီယံအစည်းအဝေး အရေးပါပုံကိုမေးရာမှာ အာဆီယံအရေးကျွမ်းကျင်သူ မမိုးသူဇာ ကလည်း ...
မမိုးသူဇာ ။. ။ အထူးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကို အစည်းအဝေး တရပ်ခေါ်တာကတော့ ဒါထူးခြားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကလည်း အာဆီယံဖက်ကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးကြီးနေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီသဘောတူချက် ၅ ချက် အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ဖို့ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖက်ကနေ အလေးမထားတဲ့သဘော သက်ရောက်နေတဲ့ အနေအထားမှာ အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကို တက်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ အာဆီယံအနေနဲ့ မျက်နှာပန်းမလှရုံတင်မကဘူး အာဆီယံရဲ့ သိက္ခာ လည်းခေါ်လို့ရတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ယုံကြည်လေးစာမှု ပုံရိပ်တွေအားလုံးကို ထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို အာဆီယံက အလေးတယူ အလေးထားဆွေးနွေးတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဘာကြောင့် နိုင်ငံတကာ ပုံရိပ်ကို အာဆီယံက အလေးထားဆွေးနွေးလာရသလဲ
မမိုးသူဇာ ။. ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းဝေးတွေကို တက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားက အာဆီယံအဝန်းအဝိုင်းတင်မဟုတ်ဘူး။ ဒီအာဆီယံရဲ့ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ၊ အခုအရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းဝေးပွဲဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ အမေရိက၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေကနေပြီး အာဆီယံနဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ကြတာ။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအဆင့်မှာ ပါဝင်တက်ရောက်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့လည်း ဒီကိစ္စက အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း အင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် အစည်းဝေးတက်ရေး မတက်ရေး ဆုံးဖြတ်ရအောင် ဘာတွေကို အဓိကထဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်ထင်ပါသလဲ။
မမိုးသူဇာ ။. ။ အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ တက်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ အနေအထားကို မပေါ်လွင်အောင် အာဆီယံက ဦးတည်နေသလား။ ယျေဘူရ အားဖြင့် တံခါးနောက်ကွယ်မှာ ညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေ အာဆီယံတရပ်လုံးအနေနဲ့ရော၊မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရော မျက်နှာမပျက်ရအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေတော့ရှိခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်တုံးက မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ အလှည့်ကျ အာဆီယံ ဥက္ကဌ တာဝန်ကို ယူရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ အဲဒီတုံးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်အောက်မှာ မြန်မာဖက်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တာက ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကို ပိုပြီးတော့ အလေးထားဖို့အတွက် အလှည့်ကျဥက္ကဌ တာဝန်ကို မယူတော့ပဲနဲ့ နောက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှ ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီး ခနဘေးထိုင်ပေးခဲ့တဲ့ အနေအထားရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်း အခု သူတို့သုံးသပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခုအာဆီယံအစည်းအဝေးကနေ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက် ကျလာမယ်လို့ သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ပါသလဲ။
မမိုးသူဇာ ။. ။ မြန်မာကို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့ အနေနဲ့ တက်ရောက်ခြင်းမဖြစ်သောလည်း ကိုယ်စားလှယ်ကို လက်ခံမလား။ နောက်တပိုင်းကတော့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်သည် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောများသက်ရောက်မလား။ ဒါတွေကို စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မွနျမာစဈကောငျစီခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကို ဒီလကုနျလုပျမဲ့ အာဆီယံထိပျသီးပှဲ မဖိတျရေး၊ ဒီနေ့ အရေးပျေါဆှေးနှေးရတာက အာဆီယံ ဂုဏျသိက်ခာဆယျနိုငျဖို့ပါလို့ သုံးသပျမူတှရှေိနပေါတယျ။
ဖီလဈပိုငျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးကလညျး အခုလို ထိပျသီးပှဲ မဖိတျဖို့က၊ သူ့ရပျတညျခကျြလညျးဖွဈတယျ၊ အမြားလညျး အလားတူခံစားနရေတယျလို့၊ Lowy Institute အဖှဲ့ အငျတာနကျ Online ဆှေးနှေးပှဲမှာ လူသိရှငျကွား မနကေ့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒီနေ့ အာဆီယံနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအစညျးအဝေးကနေ ဘယျလို ဆုံးဖွတျခကျြမြိုး ကလြာနိုငျပါလဲ။ စင်ျကာပူအခွစေိုကျ ISEAS Yusof Ishak Institute ချေါ အရှတေ့ောငျအာရှလလေ့ာရေးဌာနက မွနျမာအစီအစဉျ ညှိနှိုငျးရေးမှူး မမိုးသူဇာကို ကိုဝငျးမငျးက မနညေ့က မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာစဈကောငျဈီ ခေါငျးဆောငျကို အောကျတိုဘာ ၂၆ ကနေ ၂၈ အထိလုပျမယျ နှဈစဉျ အာဆီယံအစညျးအဝေး မဖိတျဖို့ မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး က လူသိရှငျကွားပွောခဲ့တာကို အခု အှနျလိုငျးဆှေးနှေးပှဲမှာ ဒီနအေ့ာဆီယံအစညျးအဝေးကို တကျရောကျမယျ့ ဖီလဈပိုငျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးTeodoro Locsin ဒါက သူရပျတညျခကျြဖွဈတယျဆိုပွီး အရေးပါတာကို အခုလိုရှငျးပွပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ။. ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံက စဈခေါငျးဆောငျတှကေို အဝေးမှာပဲ. ဆကျခှာထားသငျ့ပါတယျ။ အရငျပွောသလိုပဲ တနညျးနညျးနဲ့ ပွနျလြှော့ပေးလိုကျရငျ ကနြျောတို့ အာဆီယံအဖှဲ့ရဲ့ စဈမှနျတဲ့ဒသေတှငျးအဖှဲ့အဖွဈကနေ ပြောကျကှယျသှားတော့မှာပါ။ ဆိုလိုတာက အဓိပ်ပါယျမရှိတာတှေ၊ ကမ်ဘာကွီးမှာ အသိအမှတျမပွုတာတှကေို အခငျြးခငျြးစု သဘောထားပေးတဲ့ လူတစုသာဖွဈသှားကွမှာပေါ့။ ဒါဆိုရငျ အားကောငျးတဲ့ ဒသေတှငျးမဟာမိတျအဖှဲ့လို့ မချေါနိုငျပါဘူး။ အာဆီယံထဲက ကနြျောမိတျဆှတှေေ ခေါငျးဆောငျတှကေိုယျတိုငျလညျး ဒါကိုသဘောပေါကျပွီး အလားတူခံစားနကွေရပါတယျ။ ကုနျးတှငျးကြ အာဆီယံနိုငျငံတခြို့အနနေဲ့ ပြော့ပွောငျးတတျတယျဆိုပမေယျ့ လမျးပဲဖှငျ့ထားပေးစခေငျြတာပါ။ ကမ်ဘာကွီးတခုလုံးကိုတော့ သူတို့မဆနျ့ကငျြလိုပါဘူး။ အဓိကထိခိုကျမှာက အဖှဲ့ဂုဏျသိက်ခာဆိုတာ အားလုံးကောငျးကောငျးသိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံတို့ကလညျး အလားတူအနညျးနဲ့အမြားပွောလာခြိနျမှာ ဒီကုနျတှငျးကနြိုငျငံတှဆေိုတာက ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီယား၊ လာအို နဲ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံတို့ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီနအေ့ာဆီယံအစညျးအဝေး အရေးပါပုံကိုမေးရာမှာ အာဆီယံအရေးကြှမျးကငျြသူ မမိုးသူဇာ ကလညျး ...
မမိုးသူဇာ ။. ။ အထူးဆှေးနှေးဖို့အတှကျကို အစညျးအဝေး တရပျချေါတာကတော့ ဒါထူးခွားတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကတော့ နိုငျငံတျော စီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီအနနေဲ့ကလညျး အာဆီယံဖကျကနပွေီး မွနျမာနိုငျငံမှာ အရေးကွီးနတေဲ့ အရေးကိစ်စတှကေို ငွိမျးခမျြးစှာဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျကိုလညျး တောငျးဆိုထားပါတယျ။ ဒီသဘောတူခကျြ ၅ ခကျြ အကောငျထညျဖျောဆောငျဖို့ နိုငျငံတျော စီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဖကျကနေ အလေးမထားတဲ့သဘော သကျရောကျနတေဲ့ အနအေထားမှာ အာဆီယံအစညျးအဝေးတှကေို တကျမယျဆိုတဲ့ အနအေထားမှာ အာဆီယံအနနေဲ့ မကျြနှာပနျးမလှရုံတငျမကဘူး အာဆီယံရဲ့ သိက်ခာ လညျးချေါလို့ရတယျ။ နိုငျငံတကာရဲ့ ယုံကွညျလေးစာမှု ပုံရိပျတှအေားလုံးကို ထိရောကျနိုငျတယျဆိုတာကို အာဆီယံက အလေးတယူ အလေးထားဆှေးနှေးတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဘာကွောငျ့ နိုငျငံတကာ ပုံရိပျကို အာဆီယံက အလေးထားဆှေးနှေးလာရသလဲ
မမိုးသူဇာ ။. ။ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးဝေးတှကေို တကျတယျဆိုတဲ့အနအေထားက အာဆီယံအဝနျးအဝိုငျးတငျမဟုတျဘူး။ ဒီအာဆီယံရဲ့ ဆှေးနှေးဖကျနိုငျငံတှဖွေဈကွတဲ့ တခွားအငျအားကွီးနိုငျငံတှေ၊ အခုအရှအေ့ာရှထိပျသီးအစညျးဝေးပှဲဆိုလို့ရှိရငျ တျောတျောလေး ကယျြပွနျ့တဲ့ ဆှေးနှေးပှဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီ အမရေိက၊ တရုတျ၊ ဂပြနျ၊ ရုရှား ဒီလိုမြိုးနိုငျငံတှကေနပွေီး အာဆီယံနဲ့ ပါဝငျတကျရောကျကွတာ။ ခေါငျးဆောငျပိုငျးအဆငျ့မှာ ပါဝငျတကျရောကျကွမယျဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို့လညျး ဒီကိစ်စက အခုဆိုလို့ရှိရငျလညျး အငျမတနျအရေးကွီးတာဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာစဈကောငျစီခေါငျးဆောငျ အစညျးဝေးတကျရေး မတကျရေး ဆုံးဖွတျရအောငျ ဘာတှကေို အဓိကထဲ့ပွီး ဆုံးဖွတျမယျထငျပါသလဲ။
မမိုးသူဇာ ။. ။ အာဆီယံ ထိပျသီးအစညျးအဝေးကို နိုငျငံခေါငျးဆောငျအနနေဲ့ တကျရောကျဖို့ဆိုတဲ့ အနအေထားကို မပျေါလှငျအောငျ အာဆီယံက ဦးတညျနသေလား။ ယဘြေူရ အားဖွငျ့ တံခါးနောကျကှယျမှာ ညှိနှိုငျးခဲ့တာတှေ အာဆီယံတရပျလုံးအနနေဲ့ရော၊မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ရော မကျြနှာမပကျြရအောငျ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှတေော့ရှိခဲ့တယျ။ ၂ဝဝ၅ခုနှဈတုံးက မွနျမာနိုငျငံသညျ ၂ဝဝ၆ ခုနှဈမှာ အလှညျ့ကြ အာဆီယံ ဥက်ကဌ တာဝနျကို ယူရတော့မယျဆိုတဲ့အနအေထားမှာ အဲဒီတုံးကလညျး မွနျမာနိုငျငံဟာ စဈအစိုးရလကျထကျအောကျမှာ မွနျမာဖကျက ဆုံးဖွတျလိုကျတာက ပွညျတှငျးရေးကိစ်စတှကေို ပိုပွီးတော့ အလေးထားဖို့အတှကျ အလှညျ့ကြဥက်ကဌ တာဝနျကို မယူတော့ပဲနဲ့ နောကျအဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အခြိနျကွမှ ပွနျယူမယျဆိုပွီး ခနဘေးထိုငျပေးခဲ့တဲ့ အနအေထားရှိပါတယျ။ ဒါကိုလညျး အခု သူတို့သုံးသပျကွမယျထငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့။ အခုအာဆီယံအစညျးအဝေးကနေ ဘယျလိုဆုံးဖွတျခကျြ ကလြာမယျလို့ သုံးသပျကွညျ့နိုငျပါသလဲ။
မမိုးသူဇာ ။. ။ မွနျမာကို ခေါငျးဆောငျပိုငျးအနနေဲ့ အနနေဲ့ တကျရောကျခွငျးမဖွဈသောလညျး ကိုယျစားလှယျကို လကျခံမလား။ နောကျတပိုငျးကတော့ ဒါဆိုလို့ရှိရငျလညျး နိုငျငံတျော စီမံအုပျခြုပျရေး ကောငျစီကိုယျစားလှယျသညျ ထိပျသီးအစညျးအဝေးကို တကျရောကျတယျဆိုတဲ့ သဘောမြားသကျရောကျမလား။ ဒါတှကေို စဉျးစားကွရမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ခငျဗြာ။
အာဆီယံ-ကုလ ဆွေးနွေးပွဲကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့